Sida loo Save Money On Fares tareenka | Save A tareenka
Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > Sida loo Save Money On Fares tareenka
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo(Last Updated On: 11/12/2020)
Safrida dal ilaa dal, ama magaalo ilaa magaalo, waa waayo-aragnimo dhab ah la yaab leh iyo kuwa saaran tareen waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee ay tan u sameeyaan. tareenka Yurub tikidhada waxaa inta badan ku salaysan masaafada u safray, si kastaba ha ahaatee, shirkado badan oo tareenka Yurub ayaa haatan u guuray nidaam binta firfircoon - sida airfares - taas oo rakaab ah oo bedela karaan ku xiran tahay baahida, xayiraad, ama sida hore aad iibsato. Haddii aad debed u dhoofayso inay Austria, Belgium, Britain, France, Germany, or Italy, yar cilmi ah ka hor safarka tareenka run ahaantii caawin kara fidin miisaaniyada. halkan waxaa ku qoran talooyin top on sida si loo badbaadiyo lacag on tikidhada tareenka inta lagu guda jiro safaradiisa aad.
Kitaabka ka hor
Haddii la heli karo, advance train tickets typically go on sale 6 bilood ka hor waqtiga safarka. Si kastaba ha ahaatee, tayaasha xitaa laba todobaad ka hor laga yaabaa weli waxaad badbaadin qadar ku filan oo lacag, sidaa darteed ha ku dhumin waqti kasta!
Noqo qof dabacsan oo leh xilliga sanadka aad rabto in ay u safraan
In dabacsan leh marka aad rabto in ay u safraan inta badan waxay keeni kartaa in kaydka weyn. qiimaha tigidhada tareenka kici xilligii ugu xumaa xilli fasax in qaar ka mid ah dalalka Yurub. Tani caadi ahaan waa ku wareegsan xagaaga bilood, gaar ahaan bishii July iyo August.
Haddii aad fursad u haysataa in ay u safraan meel ka baxsan bilood, kuwaas oo, the tickets can be much cheaper to purchase. Sidoo kale, holiday times such as Christmas iyo Easter, are peak times – check when fasaxyada dugsiga waa on iyo isku day si looga fogaado kuwan.
Baaqatid tigidhka – lacag badbaadin on tikidhada tareenka
Weligaa jaale tigidh tareen oo kaliya si aad u aragto in lacagta ugu dhakhsaha badan hoos ka dib marka aad dhigay aad iibsatay? Train ticket prices tend to fluctuate – inta badan isla maalintaas. Iyada oo ku xidhan siyaasadda joojiyo shirkadda, waa in aad sida caadiga ah ay awoodaan in ay baajiso iyo dib-u-ballan aad tareenka ee heerka hoose haddii aad gudahood dhaqmaan 24 saacadood oo aad iibsatay asalka ah.
Paris si ay Tareenadu Biarritz
Lyon in Tareenadu Biarritz
Shirkadaha tareen qaarkood waa ka dabacsan badan kuwa kale la joojiyo waqtiga ay. Mararka qaarkood, waxaad joojin kartaa tigidhka ka baxsan suuqa kala 24-ka saac ee. Waxaa muhiim ah si aad u hubiso soo baxay website aad side ee aqriso siyaasadaha ay ka hor iibsiga tigidhada kale. Hubi in ay ilaalin ah qiimaha tareenka cusub iyo lacag badbaadiyo by rebooking tigidhka heerka hoose.
Ka faa'iidayso dhimis – Sida loo badbaadiyo lacag on tikidhada tareenka
Qaar ka mid ah waddooyinka tareenka Yurub bixiyaan dhimis weyn ee caruurta, ardayda, iyo waayeelka safarka ah. Carruurta laga bilaabo da'da saddex ilaa kow iyo guud ahaan heli boqolkiiba wanaagsan off, halka carruurta da'doodu ka yar tahay 3 typically travel free. Students and senior discounts may be available depending on the trains and destination you are traveling to. Waxaa muhiim ah in aad ardayga ama kaarka sare oo aad on at times oo dhan haddii aad iibsato tigidh dhimay.
Waxaa jira badan oo qiimaha laga dhimay la heli karo oo dhan shabakadaha tareenka kala duwan oo Yurub ah. Hubi in ay had iyo jeer ilaalin ah ka dhimis dambaysay ee soo socda our Facebook iyo Twitter pages.
Fikirka qaadashada tareen si aad magaalada ugu cadcad Yurub? Tag our website saveatrain.com si aad u hubiso soo baxay oo dhan qiimaha our gaar ah iyo bilaabaan qorshaynta quudhin soo socda!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhow-to-save-money-on-train-fares%2F - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / es in / ama / de iyo luuqado badan.
savemoney tareen safarka Travelingtips traveltips